မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကလေဆိပ်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ယခုနှစ် ပထမလေးလအတွင်း ခရီးသည်ရောက်ရှိမှုမှာ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာသည်ဟု ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသော Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) က ပြောကြားသည်။ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဧပြီလအထိ.
Episode 80: သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနဲ့ ရေဖြူမြို့နယ်က ငါးဖမ်းသမားတွေ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Dawei Watch နဲ့ ဒို့အသံတို့ဟာ ဇောတိကသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းရဲ့ပိုက်လိုင်းကြောင့် သူတို့ရဲ့ငါးဖမ်းပိုက်တွေပျက်စီးပြီးစားဝတ်နေရေး ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ ပြောဆိုနေတဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူမြို့နယ်က ရေလုပ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Boarding ဝန်ဆောင်မှုကို Dulwich ၌ စတင်
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဗြိတိသျှအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာကျောင်းဖြစ်သည့် Dulwich College Yangon (DCY) က နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစားဘော်ဒါဆောင် (International Boarding School) ကို စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း မေ ၂၉ ရက်နေ့က ကြေညာသည်။ သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ Star City တွင်.
မြန်မာစစ်တပ်က ရခိုင်တွင် ‘စစ်ရာဇဝတ်မှု’ အသစ်များ ကျူးလွန်နေဟု AI က စွတ်စွဲ
မြန်မာစစ်တပ်သည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဥပဒေဘောင်ပြင်ပမှ သတ်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်များကို ကျူးလွန်နေသည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (AI) Amnesty International က မေ ၂၉ ရက်နေ့တွင် စွပ်စွဲလိုက်သည်
ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည့် UAB Bank က ၎င်း၏ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းအား ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်က စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အဆိုပါအပလီကေးရှင်းဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများအတွက် အွန်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီး Biometric စနစ်ဖြင့် login ပြုလုပ်နိုင်မည်ဟုဆိုသည်။ “အခုလိုမျိုး uab Mobile Banking ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေအနေနဲ့ လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း၊.